Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! प्रधानमन्त्रीद्वारा सीता दाहालको स्वास्थ्यलाभको कामना
प्रधानमन्त्रीद्वारा सीता दाहालको स्वास्थ्यलाभको कामना
ललितपुर । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पत्नी सीता दाहाललाई भेट्नु भएको छ ।
मंगलबार साँझ खुमलटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले सीताको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभएको प्रचण्ड सचिवालयले जनाएको छ ।
सीता दाहाल लामो समयदेखि जटिल प्रकारको रोग ‘प्रोग्रेसिभ सुपरान्युक्लियर पाल्सी (पि.एस.पी.)' बाट पीडित हुनुहुन्छ । यसअघि उहाँको उपचार अमेरिका, सिंगापुर र भारतमा पनि भएको थियो । पछिल्लो केही समयदेखि उहाँ खुमलटारस्थित निवासमै आराम गरिरहनुभएको छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन ५, २०७८, १९:१४:००